Coinomat စျေး - အွန်လိုင်း CNMT ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Coinomat (CNMT)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Coinomat (CNMT) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Coinomat ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Coinomat တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Coinomat များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
CoinomatCNMT သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$1.56CoinomatCNMT သို့ ယူရိုEUR€1.33CoinomatCNMT သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£1.19CoinomatCNMT သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.1.43CoinomatCNMT သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr14.04CoinomatCNMT သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.9.89CoinomatCNMT သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč34.8CoinomatCNMT သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł5.84CoinomatCNMT သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$2.08CoinomatCNMT သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$2.17CoinomatCNMT သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$34.98CoinomatCNMT သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$12.09CoinomatCNMT သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$8.55CoinomatCNMT သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹116.7CoinomatCNMT သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.263.49CoinomatCNMT သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$2.14CoinomatCNMT သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$2.36CoinomatCNMT သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿48.54CoinomatCNMT သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥10.85CoinomatCNMT သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥165.47CoinomatCNMT သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1847.12CoinomatCNMT သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦604.45CoinomatCNMT သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽114.51CoinomatCNMT သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴43.14
CoinomatCNMT သို့ BitcoinBTC0.000132 CoinomatCNMT သို့ EthereumETH0.00394 CoinomatCNMT သို့ LitecoinLTC0.0266 CoinomatCNMT သို့ DigitalCashDASH0.0162 CoinomatCNMT သို့ MoneroXMR0.0165 CoinomatCNMT သို့ NxtNXT117.66 CoinomatCNMT သို့ Ethereum ClassicETC0.221 CoinomatCNMT သို့ DogecoinDOGE437.43 CoinomatCNMT သို့ ZCashZEC0.0177 CoinomatCNMT သို့ BitsharesBTS56.97 CoinomatCNMT သို့ DigiByteDGB49.65 CoinomatCNMT သို့ RippleXRP5.18 CoinomatCNMT သို့ BitcoinDarkBTCD0.0524 CoinomatCNMT သို့ PeerCoinPPC5.02 CoinomatCNMT သို့ CraigsCoinCRAIG692.56 CoinomatCNMT သို့ BitstakeXBS64.83 CoinomatCNMT သို့ PayCoinXPY26.53 CoinomatCNMT သို့ ProsperCoinPRC190.92 CoinomatCNMT သို့ YbCoinYBC0.000818 CoinomatCNMT သို့ DarkKushDANK487.35 CoinomatCNMT သို့ GiveCoinGIVE3291.12 CoinomatCNMT သို့ KoboCoinKOBO346.28 CoinomatCNMT သို့ DarkTokenDT1.44 CoinomatCNMT သို့ CETUS CoinCETI4386.72